Version 0.8.3 – Shortcode widget ee
May 30, 2012 by dalabyo 11 Comments
Version Tani dejista cayayaanka qaarkood lagu kordhiyey taageero for shortcode a nice in kuu ogolaanaya in aad meel u widget gudaha boostada
Tusaale ahaan, taas:
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: yaryar, sii daayo, shortcode
Ma ii sheegi kartaa haddii plugin adeegsanayaa loo naco ama libcurl ?
Waxaan u malaynayaa in ay libcurl leh hawlaha maktabadda phpcurl
August 15, 2012 at 8:45 at the
Marka aad u sii daayo version cusub, qaba oo dhan jaamaha ee?
August 15, 2012 at 11:36 at the
Sida ugu dhakhsaha badan waa u diyaar… 🙂
September 11, 2012 at 8:37 at the
Oo halkaas waxaan ka baran kartaa badan oo ku saabsan shortcode ah?
Tusaale ahaan, sida loo gelin doonaa WP faafiyaa dhisay-in?
Maxaad calamada ma muujiyaan marka aan u isticmaali (kaliya yihiin affar urur ee)?
Waxaad arki kartaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan shortcodes ku on http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Anigu garan maayo haddii loo isticmaali karaa in gudaha hooy u dhisay-in, laakiin aad mar walba isku dayi kartaa.
Haddii calamada ma muujiyaan doona, diri url ee reply iyo ayaan noqon faraxsan tahay in ay eegaan waxa at.
Halkan link, iyo waxaad ka arki kartaa yihiin affar urur ee geeska kore ee midig.
Markaasaa shortcode aan ku leeyahay waa
[widget Austrlia ="calamada / tpw_flags_css.php"]
By habka, qodobka ku saabsan shortcodes aad arrintaan sheeg sida mid ka mid ah isticmaalada badan oo widget, laakiin ma jiraan tilmaamaha kale ee, sida loo ka beddeli. Tusaale ahaan, sida in laga saaro calamada qaar ka mid ah, beddeli jacayl, bandhig-iska-tago hoos, iwm?
Weli waxaan heli waayeen link, fadlan isku day in xiriir uu nala soo foomka.
ku saabsan ka saarida calanka, widget muujinaysaa luqado in aad u qaybiyay for goobaha kaliya ee.
oo kelya dhibicda iyo widgets kale waxaa la doortay waxa laga yaabaa adiga oo isticmaalaya file a widget kala duwan, eeg subdirectory Widgets ee plugin ku
Sorry, ma waxaa ka mid ah link. Waxaa http://bit.ly/QnJWAf
Weli ma jirto calamada inkastoo.
Iga raalli, sidee baan aad looga qabto, waxaa laga yaabaa by magacaaga ugu horeeya?
Just xusuustay, laga bilaabo waqti aad u dheer ka hor, tan iyo markii aan ku rakiban plugin Transposh, marka firfircoonaan, menu ka tagay ee laga hago baaba'aa. Marka plugin waxaa la deactiveated, menu mar kale u muuqdaa. Ha aad hayso wax fikrad ah sababta?
Halkan shaashada soo
Waa kuwan dhowr talooyin kuwaas oo si weyn u hagaajin lahaa geynta plugin iyo dhigi igu waxa ku talinaynaa in ay wada-shaqeeya iyo la-hawlgalayaasha. (Waxaa ayaan laga yaabaa in la soo jeediyay ka hor inta, laakiin kama aanan helin info kasta).
1. Hirgeli tuuryo keyboard iyo habab kale oo si dhakhso ah loo baddasho block qoraalka soo socda si ay kursiga igu turjumi on page a.
2. Samee plugin ku fahmi cinwaanada e-mail, URLs iyo content kale in aan waa in mar uun la soo turjumo.
3. Ku dar dooranayo si koobiyaysto-qaacida iyo bogga oo dhan Tarjumaadda. Mararka qaarkood waxaa fudud in turjumi in editor dibadda, iyo mararka qaarkood aad horey u turjumidda diyaar.
Back with more iman doonna!